किन दिएनन् योगेशले थेवेलाई बधाई ? - Khula Patra
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत्र ०९, २०७८
प्रकाशित समय: १०:४९:०५
योगेश भट्टराई । तस्बिरः भट्टराईको फेसबुकबाट
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय नेता मानिन्छन् । हरेक समसामयीक गतिविधिमा सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा व्यक्त गर्छन् । ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका उनी आफ्नो जिल्लाका त ससाना विषयसमेत फेसबुक, ट्वीटरमा अपलोड गरिहाल्छन् ।
यसले आफ्नो जिल्लाका विषयमा, मतदाताका गाह्रो सारो अप्ठ्यारोमा मेरो सांसदसँगै छ है भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । तर, पछिल्लो एक विषयमा भने नेता भट्टराईको (चैत ९ गते बिहान ११ बजेसम्म) कुनै प्रतिक्रिया बाहिर आएको छैन । त्यो, पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्तिको विषय ।
पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष रक्की थेवे
आइतबार सरकारले समितिको अध्यक्षमा ताप्लेजुङ आम्बेगुदिनका रक्की थेवेलाई नियुक्ती गर्यो । त्यसपछि थेवेलाई हरेक माध्यमबाट बधाई दिनेको आइरो नै लाग्यो । सामाजिक सञ्जाल बधाईले रंगिए । पत्रपत्रिका र अनलाईमा समाचार बने ।
किन भट्टराईको कुनै प्रक्रिया बाहिर आएन ? यो चासोको विषय बनेको छ । हुन उनले प्रतिक्रिया दिनै पर्छ भन्ने पनि होइन । तर, ससाना विषयमा फेसबुकमा स्टाटस लेखिहाल्ने उनले मन्त्रीपरिषद्ले नै नियुक्ति गरेका अध्यक्षलाई बधाई वा कुनै प्रक्रिया नदिना सबैलाई चासो हुनु स्वभाविक हो । फोनबाट पनि बधाई दिएनन् । यो के कारण होला त ?
अध्यक्ष नियुक्ति भएका थेवे एकिकृत समाजवादी ताप्लेजुङका उपसचिव हुन् । यसअघि उनी नेकपा एमालेमा थिए । पहिलेदेखि नै भट्टराईको समर्थक भएर पार्टीमा लागेका थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद विधटन गरेपछि माधव नेपाल र प्रचण्डको समुहले ओलीविरुद्ध आन्दोलन गर्यो । योगेश ओलीरिरुद्ध भाषण गर्दै हिँडे ।
थेवे पनि सोही आन्दोलनमा होमिए । हरेक गतिविधिमा साथ दिए । योगेशको समर्थक बने । पछि पार्टी विभाजन हुँदा योगेश एमालेमा बसे । थेवे समाजवादीमा गए । थेवे राजनीतिमा उदाउँदै गरेका युवा नेता हुन् । तर, योगेशले बधाई नदिनुमा के कारण हुनसक्छ ?
केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा योगेश पर्यटनमन्त्री थिए । अहिले पर्यटनमन्त्री समाजवादीका प्रेम आले छन् । थेवेलाई मन्त्री आलेको प्रस्तावमा सरकारले क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्ति गरेको हो । पछिल्लो समय प्रेम र योगेसको सम्बन्ध राम्रो छैन । केहीअघि नारायणहिटी, पशुपति क्षेत्र विकास समितिलगायतमा भइरहेका कामका विषयमा यी दुई नेता एकअर्का विरुद्ध खुलेरै उत्रिएका थिए । निकै तल्लो स्तरका गालिगलौच पनि गरेका थिए ।
त्यो प्रकरणमा प्रेमको हाइहाइ र योगेशको विरोध गर्ने धेरै छन् । अहिले उनै आलेले नियुक्त गरेका व्यक्ति भनेर योगेशले बधाई नदिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । वास्तविकता त उनै जानुन् । नवनियुक्त अध्यक्ष थेवेले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । ‘माननिय योगेश भट्टराई जुनसुकै अवस्थामा पनि मेरो नेता हो । मेरो अभिभावक हो,’ थेवेले भने, ‘सबैजनासँग सरसल्लाह गरेर अघि बढ्छु ।’
विगत ५ महिनादेखि पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष पद खाली थियो । सोही पदमा सरकारले थेवेलाई तोकेको हो । पाथीभरामा अहिले यति समुहले केबुलकार बनाउने तयारी थालेको छ ।
पाथीभरा क्षेत्रका केही स्थानीय भने केबुलकार बन्न नहुने पक्षमा छन् । बनाउन नदिने पक्षमा छन् । यी दुवै पक्षलाई मिलाएर अघि बढ्नु थेवेको प्रमुख चुुनौतिको हो ।